Siouxland hanga guya kibxata ganama seati 9 a.m ttii haali qilleensa qorraa akeekachiisa jala jirti | KWIT
Ogeeyyin fayyaa Iowa akka jedhanitti talaali corona virus kan Iowa waliin gahuudhan qophii gahaa gochuu dhabuudhan, eejansii naanicha fi hojattoota gahaa dhabuu. Iowa state U.S hunda keessati osoo hin sutin tobaan lammaaf rarra’ee jira.
Website corona virus kan Iowa akka mullisuti jiraattoni Woodbury County 11,500 ta’an talaali corona virus argatanii jiran. Kunis clinica ummatala lama keessati percent 60 dabalee jira. Haatau malee, lakkoofsi biraa counties birraa keessati gudataa deemuma jira.
Hojaattooni kaampaani dhan fooni keessa baayinni isaani talaali corona virus fudhachuu didanii garuu baayyini dhiibaan lakkaahaman kan didanidha, kunis fayyaa jaraa balaarra kan ufbuusaniidha.
Talaali hojattoota jalqaba irrati akka kenamuuf union waamicha kan godhaa jiru yoo tau hojattooti kaanpadhinaf fooni barsiisudha fi waae talaali waan badaa haasawan balleesudhaf qophaahani jiru.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka mullisanitti namni 1 dabalataan sababa corona virus kan due yoo tau namni haarawa qabame ammo 200 ol dha.
Siouxland District Health nama haarawa qabame 10 qofa daballee jira waliigalatti namni qabame ammo 13,500 dha. Qorannoo bulti 14 godhame keesati parsanti 6% gad xiqqaate jira. Namni sababa virus hospitala lama kan Sioux city keessa jiru nama 5 qofa. Tarbaan darbee dura nama 25 turee namni sababa corona virus hospitalla jiru.